ကြှနျတျောနဲ့ Australia ကိုပညာလာသငျတဲ့အခါကွုံတှရေ့တဲ့ အခကျအခဲမြားနဲ့အတှအေ့ကွုံမြား (Part - 1) |
ကြှနျတျောနဲ့ Australia ကိုပညာလာသငျတဲ့အခါကွုံတှရေ့တဲ့ အခကျအခဲမြားနဲ့အတှအေ့ကွုံမြား (Part – 1)
- September 10, 2020September 10, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
Please find ZawGyi version below the article.
ကြှနျတျော့နာမညျကတော့ ပွညျ့ဟိနျးကြျောပါ .. အခုလကျရှိ Australia မှာ Master Degree တကျနပေါတယျ .. ဒီ Article မှာ Sharing လုပျပေးသှားမှာတှကေတော့ Australia မရောကျခငျနဲ့ ရောကျပွီးကွုံတှရေ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ အခကျအခဲတှပေဲ ဖွဈပါတယျ .. အရငျဆုံး ကြှနျတျောဘာလို့ Australia ကို ရှေးခယျြဖွဈလဲဆိုတဲ့အကွောငျးအရာလေးနဲ့စလိုကျရအောငျ
ကြှနျတျောဘာလို့ Australia ကိုရှေးခယျြဖွဈခဲ့သလဲ ?
ကြှနျတျော Master Degree မတကျခငျ ရခဲ့တဲ့ဘှဲ့က Bachelor of Science in Computing ပါ .. အထူးပွုဘာသာကတော့ Network Security ပေါ့ .. ဒီဘှဲ့ကို မွနျမာနိုငျငံက Info Myanmar University နဲ့ Scotland နိုငျငံရဲ့ အစိုးရတက်ကသိုလျကွီးဖွဈတဲ့ Edinburgh Napier University တို့ ပူးပေါငျးဖှငျ့လှဈထားတဲ့အတနျးကနေ 2018 မှာ ရရှိလာတာဖွဈပါတယျ .. ဒီဘှဲ့ရပွီးတဲ့အခြိနျမှာ စဥျးစားမိတာက Master ဘှဲ့ကို ဒီတက်ကသိုလျကနပေဲ Scotland ထိ သှားတကျမယျဆိုတဲ့ အတှေးပဲဖွဈပါတယျ
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော့အိမျကတော့ Scotland ထိလှတျဖို့ဆန်ဒမရှိပါဘူး .. ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျော့မှာ ငယျငယျကတညျးက အဆုတျနဲ့ပတျသကျပွီးအားနညျးတဲ့ ပွဿနာရှိတာရယျ .. Edinburgh မွို့က အရမျးအေးတဲ့ဒသေဖွဈနတောရယျကွောငျ့ပါ .. ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော့အနနေဲ့ UK ကိုမရှေးခယျြပဲ တခွားနိုငျငံမှာ Master တကျဖို့ တက်ကသိုလျရှာပုံတျောဖှငျ့ရပါတယျ
ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောအဓိကစဥျးစားတာ အခကျြ3ခကျြပါ
ကိုယျတကျမယျ့ နိုငျငံနဲ့ တက်ကသိုလျရဲ့အဆငျ့အတနျး
ကိုယျတကျရောကျမယျ့ Degree ရဲ့ ကုနျကစြရိတျ
ကြောငျးပွီးရငျ ကိုယျ့ကိုပွနျအကြိုးပွုမယျ့ အခကျြအလကျ
နံပါတျ 1 အတှကျ ကြှနျတျောက UK ကိုဘေးဖယျထားလိုကျပါတယျ (အမှနျတော့ UK သှားဖို့လဲ အကုနျစုံစမျးထားပါတယျ .. Master အပွီးအစီး သိနျး 600 လောကျကုနျကမြယျလို့သိရပါတယျ) .. ဒီတော့ ကြှနျတျော့ခေါငျးထဲရောကျလာတာက အမရေိကားနဲ့ သွစတြေးလနြိုငျငံတို့ပဲဖွဈပါတယျ .. ဂြာမနီနိုငျငံကိုလဲစိတျဝငျစားပမေယျ့ German Language ကွောငျ့ စောစောစီးစီးပယျလိုကျပါတယျ
ဒါနဲ့ US ကိုသှားဖို့အရငျစုံစမျးပါတယျ .. ရနျကုနျမှာရှိသမြှ ပညာရေးဝနျဆောငျမှု Service ပေးတဲ့နရောတှအေကုနျလုံးကိုသှားပွီး US မှာ Master ဆကျတကျဖို့စုံစမျးကွညျ့ပါတယျ .. ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောနဲ့အဆငျမပွတောတခုက US မှာ Master တကျမယျဆိုရငျ GMAT ဒါမှမဟုတျ GRE လို Test မြိုးဖွခေိုငျးတာပါ .. ကြှနျတျောက ဒီ Test တှမေဖွခေငျြတော့လို့ US မှာ Master တကျဖို့ကိစ်စ စှနျ့လှတျလိုကျပါတော့တယျ
ဒါနဲ့နောကျဆုံးစုံစမျးဖွဈတာကတော့ Australia ပဲဖွဈပါတယျ .. ကုနျကစြရိတျအနနေဲ့တှကျမယျဆိုရငျ Australia မှာ Master တကျတာ UK မှာ Master တကျတာထကျ2ဆနီးပါးလောကျပိုကုနျကတြာကိုသှားတှပေ့ါတယျ .. ဒါပမေယျ့လဲ US လောကျတော့ စြေးမကွီးဘူးပေါ့လေ .. Australia နဲ့ US ကုနျကစြရိတျကတော့ မတိမျးမယိမျးပါပဲ .. အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး Australia ရဲ့ ပညာရေးက အဆငျ့အတနျးမွငျ့မားပွီး ပညာရေးနယျပယျထဲမှာလဲ Reputation ကောငျးတဲ့ထဲပါတယျ .. Australia ဟာ နိုငျငံရေးအရ ငွိမျးခမျြးတယျ, ကြှနျတျောအခုရောကျနတေဲ့ Queensland ပွညျနယျဆိုရငျလဲ ရာသီဥတုက မွနျမာနိုငျငံနဲ့အနညျးငယျသှားဆငျတယျ .. အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ Master2နှဈတကျပွီးရငျ Postgraduate Work Visa ဆိုပွီး အလုပျလုပျဖို့ Visa2နှဈပွနျပေးတာပဲဖွဈပါတယျ .. ဆိုတော့ ရအေစုံ, မီးအစုံနဲ့ လထေီးခုနျဖို့ ဖွဈသှားပွီပေါ့
ကြှနျတျောဒီကိစ်စတှမေလုပျဖွဈသေးခငျ အရငျဆုံးလုပျဖွဈတာက Word File တခုထဲမှာ ကြောငျးနာမညျရယျ, Course Name ရယျ, ကုနျကစြရိတျရယျကို Online ကနအေသေးစိတျ Research လုပျပွီး သခြောစာရငျးပွုစုထားပါတယျ .. ဒီထဲကမှ ကိုယျ့ Budget နဲ့အဆငျပွမေယျ့ တက်ကသိုလျကို Target ထားရှေးတာပါ .. ကြှနျတျောစာရငျးလုပျထားတဲ့ တက်ကသိုလျက UK, US, Australia နိုငျငံတှကေ တက်ကသိုလျပေါငျး 20 ကြျောလောကျရှိပါတယျ .. အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ UK နဲ့ US ကိုပယျလိုကျပွီဆိုတော့ Australia မှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျတှကေို အသေးစိတျလိုကျစုံစမျးတဲ့အလုပျစပါတယျ
နောကျဆုံးကြှနျတျော James Cook University ကိုရှေးခယျြဖွဈလိုကျတယျ .. အဲ့ဒီတက်ကသိုလျမှာ ကြှနျတျောစိတျဝငျစားတဲ့ Major ရှိနလေို့ပါ .. Degree ကတော့ Master of Information Technology – Master of Business Administration ဆိုတဲ့ Joint Degree ဖွဈပါတယျ .. ကြှနျတျောက အနာဂတျမှာကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတခုလဲလုပျခငျြတော့ အခု Joint Degree ကကြှနျတျော့အတှကျ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈသှားပါတယျ .. ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ IT လဲတကျခှငျ့ရမယျ .. ကိုယျ့အနာဂတျ Plan မှာအထောကျအကူပွုနိုငျမယျလို့ယူဆရတဲ့ MBA ကိုလဲ တကျခှငျ့ရမယျ .. ကြှနျတျော့အတှကျကတော့ Win-Win အခွအေနပေါပဲ
ဒါ့အပွငျ James Cook University Campus တညျရှိတဲ့ Brisbane မွို့ဟာဆိုရငျလဲ Australia မှာ တတိယအကွီးဆုံးမွို့ဖွဈပွီးတော့ Melbourne, Sydney တို့လောကျ နစေရိတျ, စားစရိတျ မကုနျကတြဲ့မွို့ဖွဈနပေါတယျ .. ဒါဟာအဖကျဖကျက အဆငျပွနေပွေီလို့ ယူဆလို့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ James Cook University မှာ Master of Information Technology – Master of Business Administration တကျဖို့ရှေးခယျြလိုကျတာပါ .. ဒီကြောငျးရှေးတဲ့အထိ ကြှနျတျောနဲ့ ကြှနျတျော့သူငယျခငျြးတယောကျ အတူတူလုပျပါတယျ .. သူကလဲ Bachelor ပွီးတဲ့ထိ ကြှနျတျောနဲ့တခနျးတညျးတူတူတကျခဲ့တာဆိုတော့ Master ဆကျတကျလဲ တူတူတကျမယျဆိုလို့ တိုငျပငျပွီးဆုံးဖွတျဖွဈခဲ့ကွတာပါ
Part2နဲ့ Part3မှာ ကြောငျးလြှောကျလုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့နဲ့ ကနျြတဲ့အကွောငျးအရာမြားကိုဖျောပွပေးသှားပါမယျ .. ဖတျရှုပေးလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ
ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ ပြည့်ဟိန်းကျော်ပါ .. အခုလက်ရှိ Australia မှာ Master Degree တက်နေပါတယ် .. ဒီ Article မှာ Sharing လုပ်ပေးသွားမှာတွေကတော့ Australia မရောက်ခင်နဲ့ ရောက်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အရင်ဆုံး ကျွန်တော်ဘာလို့ Australia ကို ရွေးချယ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်
ကျွန်တော်ဘာလို့ Australia ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ?
ကျွန်တော် Master Degree မတက်ခင် ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့က Bachelor of Science in Computing ပါ .. အထူးပြုဘာသာကတော့ Network Security ပေါ့ .. ဒီဘွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံက Info Myanmar University နဲ့ Scotland နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Edinburgh Napier University
တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတန်းကနေ 2018 မှာ ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဘွဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ စဉ်းစားမိတာက Master ဘွဲ့ကို ဒီတက္ကသိုလ်ကနေပဲ Scotland ထိ သွားတက်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အိမ်ကတော့ Scotland ထိလွှတ်ဖို့ဆန္ဒမရှိပါဘူး .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းတဲ့ ပြဿနာရှိတာရယ် .. Edinburgh မြို့က အရမ်းအေးတဲ့ဒေသဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့်ပါ .. ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ UK ကိုမရွေးချယ်ပဲ တခြားနိုင်ငံမှာ Master တက်ဖို့ တက္ကသိုလ်ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အဓိကစဉ်းစားတာ အချက်3ချက်ပါကိုယ်တက်မယ့် နိုင်ငံနဲ့ တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်အတန်း
ကိုယ်တက်ရောက်မယ့် Degree ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်
ကျောင်းပြီးရင် ကိုယ့်ကိုပြန်အကျိုးပြုမယ့် အချက်အလက်
နံပါတ် 1 အတွက် ကျွန်တော်က UK ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါတယ် (အမှန်တော့ UK သွားဖို့လဲ အကုန်စုံစမ်းထားပါတယ် .. Master အပြီးအစီး သိန်း 600 လောက်ကုန်ကျမယ်လို့သိရပါတယ်) .. ဒီတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲရောက်လာတာက အမေရိကားနဲ့ သြစတျေးလျနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဂျာမနီနိုင်ငံကိုလဲစိတ်ဝင်စားပေမယ့် German Language ကြောင့် စောစောစီးစီးပယ်လိုက်ပါတယ်
ဒါနဲ့ US ကိုသွားဖို့အရင်စုံစမ်းပါတယ် .. ရန်ကုန်မှာရှိသမျှ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု Service ပေးတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသွားပြီး US မှာ Master ဆက်တက်ဖို့စုံစမ်းကြည့်ပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေတာတခုက US မှာ Master တက်မယ်ဆိုရင် GMAT ဒါမှမဟုတ် GRE လို Test မျိုးဖြေခိုင်းတာပါ .. ကျွန်တော်က ဒီ Test တွေမဖြေချင်တော့လို့ US မှာ Master တက်ဖို့ကိစ္စ စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်
ဒါနဲ့နောက်ဆုံးစုံစမ်းဖြစ်တာကတော့ Australia ပဲဖြစ်ပါတယ် .. ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် Australia မှာ Master တက်တာ UK မှာ Master တက်တာထက်2ဆနီးပါးလောက်ပိုကုန်ကျတာကိုသွားတွေ့ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်လဲ US လောက်တော့ ဈေးမကြီးဘူးပေါ့လေ .. Australia နဲ့ US ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ .. အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Australia ရဲ့ ပညာရေးက အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး ပညာရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလဲ Reputation ကောင်းတဲ့ထဲပါတယ် .. Australia ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ငြိမ်းချမ်းတယ်, ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ Queensland ပြည်နယ်ဆိုရင်လဲ ရာသီဥတုက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနည်းငယ်သွားဆင်တယ် .. အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ Master2နှစ်တက်ပြီးရင် Postgraduate Work Visa ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ Visa2နှစ်ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဆိုတော့ ရေအစုံ, မီးအစုံနဲ့ လေထီးခုန်ဖို့ ဖြစ်သွားပြီပေါ့
ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေမလုပ်ဖြစ်သေးခင် အရင်ဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက Word File တခုထဲမှာ ကျောင်းနာမည်ရယ်, Course Name ရယ်, ကုန်ကျစရိတ်ရယ်ကို Online ကနေအသေးစိတ် Research လုပ်ပြီး သေချာစာရင်းပြုစုထားပါတယ် .. ဒီထဲကမှ ကိုယ့် Budget နဲ့အဆင်ပြေမယ့် တက္ကသိုလ်ကို Target ထားရွေးတာပါ .. ကျွန်တော်စာရင်းလုပ်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်က UK, US, Australia နိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်ပေါင်း 20 ကျော်လောက်ရှိပါတယ် .. အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ UK နဲ့ US ကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ Australia မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကို အသေးစိတ်လိုက်စုံစမ်းတဲ့အလုပ်စပါတယ်
နောက်ဆုံးကျွန်တော် James Cook University ကိုရွေးချယ်ဖြစ်လိုက်တယ် .. အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Major ရှိနေလို့ပါ .. Degree ကတော့ Master of Information Technology – Master of Business Administration ဆိုတဲ့ Joint Degree ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်က အနာဂတ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတခုလဲလုပ်ချင်တော့ အခု Joint Degree ကကျွန်တော့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သွားပါတယ် .. ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ IT လဲတက်ခွင့်ရမယ် .. ကိုယ့်အနာဂတ် Plan မှာအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ MBA ကိုလဲ တက်ခွင့်ရမယ် .. ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ Win-Win အခြေအနေပါပဲ
ဒါ့အပြင် James Cook University Campus တည်ရှိတဲ့ Brisbane မြို့ဟာဆိုရင်လဲ Australia မှာ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ Melbourne, Sydney တို့လောက် နေစရိတ်, စားစရိတ် မကုန်ကျတဲ့မြို့ဖြစ်နေပါတယ် .. ဒါဟာအဖက်ဖက်က အဆင်ပြေနေပြီလို့ ယူဆလို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် James Cook University မှာ Master of Information Technology – Master of Business Administration တက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာပါ .. ဒီကျောင်းရွေးတဲ့အထိ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတယောက် အတူတူလုပ်ပါတယ် .. သူကလဲ Bachelor ပြီးတဲ့ထိ ကျွန်တော်နဲ့တခန်းတည်းတူတူတက်ခဲ့တာဆိုတော့ Master ဆက်တက်လဲ တူတူတက်မယ်ဆိုလို့ တိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ
Part2နဲ့ Part3မှာ ကျောင်းလျှောက်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နဲ့ ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ် .. ဖတ်ရှုပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်